“Cheering Myanmar Team” campaigns for the people of Myanmar – LYCA COMMUNICATIONS
“Cheering Myanmar Team” campaigns for the people of Myanmar
Date: October 23, 2018Author: Rahul0Comments
Yangon – October 23, 2018 – Suzuki (Myanmar) Motor Company Limited announces that they will select the lucky winners for their three exclusive campaigns, especially designed for the people of Myanmar to join as part of the excitement in cheering Myanmar Team at AFF SUZUKI CUP 2018.
“Getachance to win AFF SUZUKI CUP match ticket” (10 prizes /2tickets for each prize)*
Using AFF SUZUKI CUP 2018 frame on Facebook profile picture
Share on Facebook with #AFFSUZUKICUP18 and #CheerMyanmarTogetherAFF and setapost as public
Capture the post and send to Suzuki Myanmar Motor Facebook Page’s inbox
Period: Oct 23 to Nov 15, 2018
Note: Winner will be announced on Nov 17, 2018.
“Getachance to win New Smartphone” – (3 prizes / 1 Smartphone for each prize)**
Go to Suzuki showroom, get free 100Plus beverage, takeaphoto with SWIFT Car, Presenter Standees, Myanmar National Team Jersey
Share on Facebook with #AFFSUZUKICUP18, #CheerMyanmarTogetherAFF, #SWIFTAFFSuzukiCup2018 and set post as public
Period: Oct 23 to Nov 25, 2018
Note: Winner will be announced on Dec 20, 2018.
“Test drive to getachance to win All-New Suzuki SWIFT” – (1 prize)***
Fill the online form in Suzuki Myanmar official website: http://www.suzukimyanmar.com to receive the serial number via SMS
Then go to the nearest showroom or dealer
Show the test drive code to the showroom to receive confirmation SMS for the test drive
Get the SWIFT notebook at the showroom instantly asagift
Enjoy the test drive with the New SWIFT 2018
Receive SMS for the New SWIFT lucky draw program
Period: Oct 23 to Dec 31, 2018
Note: Winner will be announced on Jan 10, 2019.
For more information, please visit the official Facebook page of Suzuki Myanmar Motor Co., Ltd: http://www.facebook.com/suzukimyanmarmotorcoltd and the newly launched website: http://www.suzukimyanmar.com.
ဆူဇူကီးမှ ၎င်း၏ ကမ္ဘာကျော်ကားအမျိုးအစား – All New Swift ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး စတင်ထုတ်လုပ် မိတ်ဆက်
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် – ဆူဇူကီး (မြန်မာ) မော်တော်ယာဉ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်(Suzuki Myanmar Motor Company Limited) မှ ကားချစ်သူမိသားစုများ စောင့်မျှော်နေကြသည့် နောက်ဆုံးပေါ် ဆန်းသစ်ကွန့်မြူးသော စတိုင်ဒီဇိုင်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့် မောင်းနှင် စွမ်းဆောင်ရည် ပါရှိသော ကမ္ဘာအနှံ့ တွင် နာမည်ကျော် လူသိထားပြီးဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မထမဆုံး ထုတ်လုပ်ထားသည့် ကျစ်လစ်သိပ် သည်းသော ဆူဇူကီးကား အမျိုးအစား All New Suzuki Swift ကို ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် စတင်မိတ်ဆက် လိုက်ပါသည်။
“ဆန်းသစ်တီထွင်မှု – ပျော်ရွှင်မှုနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားမှု (INNOVATION – Fun & Sporty)” အိုင်ဒီယာဖြင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး တမူထူးခြားသော ဒီဇိုင်း၊ ကောင်းမွန်သော မောင်းနှင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကျစ်လစ် သောအရွယ်အစားရှိသည့်အပြင် အခြားအဆင့်မြင့် အင်္ဂါရပ်များကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဆူဇူကီး၏ All New Swift မော်တော်ကားကို GL နှင့် GLX ဟူ၍ အမျိုးအစား (၂) မျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
“ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆူဇူကီးရဲ့ All New Swift မော်တော်ကားအမျိုးအစားကို ထုတ်ဖော်ပြရတဲ့အတွက် ကျွန်တော် တို့အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ Swift ကားတွေကို ကျွန်တော်တို့ တခြားကား အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ Ciaz နဲ့ Ertiga ကားတွေလိုမျိုးပဲ ရန်ကုန် သီလဝါ စက်မှုဇုန်က အသစ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံမှာပဲ ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသစ် မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ All New Swift မော်တော်ကားဟာဆူဇူကီးရဲ့ ဆန်းသစ်ကွန့်မြူးတဲ့ မျိုးဆက်သစ် HEARTECT ပလက်ဖောင်းကို အခြေခံ ဆောက်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ အဆင့်အတန်းအတိုင်း ပိုစွမ်းအင်ကောင်းတဲ့၊ ပိုစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားပြီး လုံခြုံမှုအပိုင်းမှာ လည်း ပိုအဆင့်မြင့်အောင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပဲ သေချာထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟုဆူဇူကီး(မြန်မာ) မော်တော်ယာဉ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Mr. Keiichi Asano မှ ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ All New Swift မော်တော်ကားကို အသက် ၂၀ ကနေ ၃၅ နှစ်ဝန်းကျင် မော်တော်ကား ပထမဆုံး ဝယ်ယူကြဖို့ ရည်ရွယ်စိတ်ကူးရှိကြတဲ့ လူငယ်တွေအပါအဝင် ဝယ်ယူသူ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ထား တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့်ထားတဲ့ fuel efficiency, စတိုင်ကျပြီး ပိုပေါ့ပါးတက်ကြွတဲ့ ဒီဇိုင်း အသွင်အပြင်နဲ့ အရည်အသွေးမြင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပါဝင်တဲ့အတွက် ဒီ All New Swift ကားက မြန်မာနိုင်ငံ မော်တော်ကား ဈေးကွက်ထဲမှာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ” ဟု Mr. Keiichi Asano မှဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆူဇူကီး(မြန်မာ) မော်တော်ယာဉ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဧရာဝတီဘဏ်နှင့် အတူလက်တွဲ၍ အလားအလာ ရှိသော ဆူဇူကီးမော်တော်ကား ဝယ်ယူသူ မိဘပြည်သူ များအတွက် ၇ နှစ် မော်တော်ယာဉ် အရစ်ကျပေးချေ ဝယ်ယူနိုင်မည့် အစီအစဉ် ‘AYA Super Suzuki Finance’ ကို မကြာသေးခင်က မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
‘AYA Super Suzuki Finance’ အစီအစဉ်တွင် ဝယ်ယူသူများ အနေဖြင့် ကားတန်ဖိုး၏ ၂၀%ကို ကနဦး လက်ငင်းပေးချေပါက ကျန်ပမာဏကို (၅)နှစ်ခန့် အရစ်ကျပေးချေစနစ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ၂၅%ကို ကနဦး လက်ငင်းပေးချေပါက ကျန်ပမာဏကို (၇)နှစ်ခန့် အရစ်ကျပေးချေစနစ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဤအစီအစဉ်မှတဆင့် ဝယ်ယူသူများသည် ဝန်ဆောင်ခများနှင့် အရောင်းကော်မရှင်ခများ ပေးဆောင်ရန်လည်း မလိုအပ်ပါ။
ဝယ်ယူသူ ဖောက်သည်များအား ရောင်းချရန်နှင့် စိတ်ကျေနပ်မှု အမြင့်ဆုံး ရရှိအောင် ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ဆူဇူကီး မှ အသင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ဆူဇူကီးအနေဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများ ကွန်ယက်ကို တိုးချဲ့ နိုင်အောင် ဆက်လက် ကြိုးစားလျက်ရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အရောင်းပြခန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ (၃၉) ခန့်တွင် လည်း ကောင်းမွန်စွာ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးထားသော ဝန်ထမ်းများမှ လျင်မြန်၍ ထိရောက်မှုရှိပြီး အရည် အသွေး မြင့်မားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းလျက် ရှိနေပါသည်။ ၎င်းအပြင် ဆူဇူကီးမှ ကားအပိုပစ္စည်းများကိုလည်း သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချ ပေးပို့လျက် ရှိပါသည်။
အသစ် မိတ်ဆက်လိုက်သော All New Swift မော်တော်ကားများကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အရောင်းပြခန်းများတွင် ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဆူဇူကီး(မြန်မာ)မော်တော်ယာဉ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ Facebook စာမျက်နှာ http://www.facebook.com/suzukimyanmarmotorcoltd နှင့် ဆူဇူကီးမြန်မာ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် http://www.suzukimyanmar.com တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
CarJapanLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMotorMyanmarMyanmar PR AgencyPRPress ReleasePublic RelationsSuzuki MotorSuzuki MyanmarTeam LycaVehicleYangon
Previous Previous post: Suzuki unveils first time locally produced all new Swift in Myanmar today
Next Next post: Yangon Dry Port facilities officially open for services